Warbixin ku saabsan raad-reebka maamul-gobaleedyada ku soo badanaya Somaliya, maxayse soo kordhin karaan? – Radio Daljir
Galkacyo, May 12 – Tan iyo intii hay’adda xasaradaha adduunka ee ICG ay ku talisay in la taageero ama la garab is-taago maamul-goboleeddada iyo ururrada rasmiga ah ee ka taliya deegaannada waxaa sii kordhayey dhismaha maamul-gobolleeddada gudaha Soomaaliya.
Meelaha qaar gobol kaligiisa ah ayaa looga dhawaaqay ugu yaraan saddex maamul-goboleed oo gudboon, inkastoo badankoodu aysan ahayn kuwa si rasmi ah u hawl-galay laakiin afka ahaan loo magacaabay, waxaana ay sii xoogaysteen markii maamul-goboleeddada iyo ururada si gaar ah ahmiyad loo siiyey shirkii Nairobi ee uu gar-wadeenka ka ahaa Augustine Mahiga
Toddobaadkan oo kaliya waxaa la magacaay illaa saddex maamul-goboleed oo ay iska feer-dhisteen siyaasiyiin intooda badan kala aragti duwan.
Inkasta oo ay jiraan maamullo horay u dhisnaa haatanna hanaqaaday, misna kororka dhissidda maamul-goboleeddadu waa uu sii laba-lixaadsaday kaddib markii ergayga QM ee Soomaaliya Amb. Augustine Mahiga shirkii magaalada Nairobi uu ku marti-qaaday, muhiimad gaar ahna siiyey maamul-goboleeddada iyo ururada ka hawl-gala Soomaaliya taas oo horseed u noqotay in lagu tartamo dhismaha maamullo aan loo meel iyo miidaan dayin
Warbixintaan waxaad uga bogan doontaan su’aalo dhawr ah iyo jawaabahooda sida goormuu curtay hammiga federaal? dhissidda badan ee maamulladase ma waafaqsan yihiin nidaamka federaaliisimka? Maxaase keenay sicir-barar maamuleed, mise u danbaa nidaamka federalka tallabooyin? mise waa u lug-gooyo?